पाठ फाइलहरूको निर्यात
पाठ फाइलको निर्यात संवाद ले तपाईँंलाई पाठ फाइलहरूको निर्यात विकल्प परिभाषित गर्दछ।यदि तपाईँंले स्प्रेडसिट डेटा लाई फाइल प्रकार "Text CSV" को रूपमा बचत गर्नु भयो भने,संवाद देखा पर्नेछ र यदि Save As संवादमा सम्पादन फिल्टर सेटिङहरूजाँच बाकसमा चिन्ह लगाईएमा।.
फाँट बिच्छेदक,पाठ बिच्छेदक र क्यारेक्टर सेट जुन पाठ निर्यातका लागि प्रयोग हुन्छ, लाई परिभाषित गर्दछ,
पाठ निर्यातका लागि क्यारेक्टर सेट वर्णन गर्दछ।
फाँट डेलिमिटर रोज्नुहोस वा प्रविष्टि गर्नुहोस् , जसले डेटा फाँट विभाजन गर्दछ।
पाठ डेलिमिटर रोज्नुहोस वा प्रविष्टि गर्नुहोस् , जसले हरेक डेटा फाँटलाई संलग्न छेद गर्दछ
स्थिर गरिएको स्तम्भ चौडाइ
स्थिर चौडाइ सँग सबै डेटा फाँटहरू निर्यात गर्दछ।
निर्यात गरिएको पाठ फाइलमा डेटा फाँटको चौडाइ चाँहि अहिलेको अनुरूप स्तम्भको चौडाइ सँग सेट हुन्छ।
मानहरू मुद्रा अहिले कक्षमा देखिए जस्तै ढाँचामा निर्यात गरिएको छ.
यदि मान निष्यित स्तम्भ चौडाइ भन्दा लामो छ भने,यो ### स्ट्रीङको रूपमा निर्यात हुनेछ।
यदि पाठ स्ट्रीङ निष्यित स्तम्भ चौडाइ भन्दा लामो छ भने,यो अन्त्यमा काटिनेछ।
पङ्क्तिबद्धबायाँ,केन्द्र र दायाँ घुसाईएका खाली स्थानहरूबाट नक्कल हुनेछन।
Title is: पाठ फाइलहरूको निर्यात